IAeroflot iqala kwakhona iinqwelomoya eMoscow-Tokyo | Iindaba zeenqwelo moya
Ikhaya » Iindaba zeenqwelo moya » IAeroflot iqala kwakhona ngeenqwelo moya zaseMoscow naseTokyo
IAeroflot iqala kwakhona ngeenqwelo moya zaseMoscow naseTokyo
Inqwelomoya yelizwe kunye nenqwelomoya enkulu eRashiya, I-PJSC I-Aeroflot - Iindiza zaseRussia, eyaziwa njenge Aeroflot, ibhengeze ukuba izakuqhuba kwakhona iinqwelomoya ukusuka eMoscow ukuya eTokyo ngoNovemba 5.
Ukusukela nge-5 kaNovemba, iinqwelomoya eziya eJapan ziya kuqhubeka kwakhona. Inqwelomoya yokuqala eya eTokyo icwangciselwe uNovemba 5, 2020, iinqwelomoya kwinqanaba lokuqala ziya kusebenza kube kanye ngeveki, emva koko kabini ngeveki, ngoLwesine nangoMgqibelo (ubuya ngeMigqibelo nangeeCawa), ”yatsho inqwelo moya kwingxelo.
IAeroflot ikwatsho ukuba iyakwandisa inani leenqwelomoya eziya eBelarus, Switzerland naseMaldives.
Inkampani yongeze ukuba icwangcisa ukuphinda kabini inqwelomoya eya eBelgrade (eSerbia) eyaphinda yaqala ngo-Okthobha u-17 kwaye bayenza kabini ngeveki. Inani leenqwelomoya eziya eMinsk naseGeneva ziya kunyuswa ziye kathathu ngeveki, eMaldives - ukuya kuthi ga kane ngeveki.
I-Russia imise iinqwelo moya ezihamba rhoqo namanye amazwe ngo-Matshi ngenxa yesifo secoronavirus. Ehlotyeni, iinqwelomoya eziya kula mazwe alandelayo zaqala kwakhona: I-Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, South Korea, Egypt, UAE, Turkey, Great Britain, Switzerland, Tanzania kunye neMaldives.
Nangona kunjalo, ezinye iindlela zixhomekeke kuthintelo kwinani leenqwelo moya eziqhutywa ngeveki.
Kwiveki ephelileyo, ikomkhulu, licaphula umyalelo kwi-Nkulumbuso yelizwe, libhengeze ukuqala kwakhona kweenqwelomoya ukusuka eRashiya ukuya eSerbia, eCuba naseJapan.
Kwangoko, iAzur Air ibhengeze ukuba iceba ukumilisela iinqwelomoya eCuba ukusukela nge-4 kaNovemba.